जसपा आन्तरिक विवाद : रेशम चौधरी तटस्थ ! - नेपाल कुरा
जसपा आन्तरिक विवाद : रेशम चौधरी तटस्थ !
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी तटस्थ बसेका छन् । कारागारबाट निर्वाचन आयोग पुगेका चौधरीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षका नेतासँग छलफल गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै तटस्थ बस्ने निर्णय सुनाएका हुन्।
पार्टीको आन्तरिक विवादमा हस्ताक्षर गर्न डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीलाई कडा सुरक्षा घेराबीच आयोग लगिएको थियो। आयोगमा अध्यक्ष यादवको पक्षमा ३४ र ठाकुरको पक्षमा १६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सत्ता समीकरणका दौरानमा दुई समूहमा विभाजन भएको जसपाले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन सोमबार पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको हो । आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरी यही साउन ७ गते कानुनी बहस सकेर पार्टी एकीकरण बखत संलग्न कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो ।
सोहीअनुरुप जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य सनाखतका लागि आयोगमा उपस्थिति भएका हुन् । सनाखतपछि आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय सुनाउनेछ ।
उपेन्द्र यादव पक्षमा कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएको दाबी गरिएकाले सोही पक्षले आधिकारिकता पाउने अनुमान गरिएको छ । यादवले आफ्नो पक्षमा ३४ जनाले सनाखत गरेको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडालको नाम अनुमोदन
राष्ट्रियसभा बैठक : तुइनदेखि सीमा अतिक्रमणका समस्या उठान
बैशाख ११ बाट कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियान थाल्ने